Buy လိ​မ္မော်​ဆပ်​ပြာ in ရန်ကုန် (1,200 Ks) on ipivi
ဈေးနူန်း - 1200( in stock )
မိတ်ကပ်လိမ်း တဲ့အခါမှာ လှနေဖို့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ ကအဓိကနော်~!!
တော်တော်များများက မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ ကိုသိပ်အလေးမထားကြဘူး မလား~??
အဲ့တော့ အစ်မတွေ,ညီမတွေ အတွက် ဒီမျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ အကြောင်းပြောပြမယ်နော်~!!
ဒီဆပ်ပြာက Cream ဟုတ်ဘူး~ ဆပ်ပြာတုံးပါ~
တင်းတိပ်​ ၀က်​ခြံ ဖြစ်တဲ့ အသားအရေတွေအတွက် သုံးဖို့သင့်တော်တဲ့ ဆပ်ပြာပါ~
နောက်တစ်ခုက မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ဖယ်ရှားပေးပြီး အဆီဓာတ်ကိုလျှော့ပေးတယ်~
**အကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ဒီဆပ်ပြာကို သစ်ရင်း သစ်ရင်းနဲ့ အသားဖြူသွားပြီး တင်းတိတ်တွေ,ဝက်ခြံတွေ လျော့လျော့သွားတာပါဘဲ~** (လက်တွေ့ပါ)
မျက်နှာက ပျော့ပြီးတွဲတွဲကြီး နူးညံ့တာမဟုတ်ဘဲ, တင်းတင်းရင်းရင်းလေးနဲ့ နူးညံ့သွားတာပါ~
နယ်​မှ မှာယူသူများ ၁၀ တုံးအနည်းဆုံးယူရပါမယ်